खुलेआम हस्तमैथुन गर्दै गरेका यी व्यक्तिको एक युवतीले भिडियो लाइभ गरिदिएपछि… – Rabin's Blog
खुलेआम हस्तमैथुन गर्दै गरेका यी व्यक्तिको एक युवतीले भिडियो लाइभ गरिदिएपछि…
Buletin Post July 11, 2018 विश्व	0
एजेन्सी। भारतको पश्चिम बंगालको बंदेल रेलवे स्टेशनमा निकै आश्चर्यजनक घटना भएको छ । यहाँ उक व्यक्ति खुलेआम प्लेटफर्ममा हस्तमैथुन गर्दै थिए । ट्रेनमा बसेकी एक युवतीले ती व्यक्तिलाई यस्तो अश्लील काम गर्दै गरेको देखेपछि फेसबुकमा लाइभ गरिदिइन् । ट्रेन हिँड्नै लाग्दा ती व्यक्तिले खुलेआम हस्तमैथुन गर्न सुरु गरेको बताइएको छ । घटनाबारे रेवलेका कर्मचारीले थाहा पाउनासाथ ती व्यक्ति त्यहाँबाट भागेको बताइएको छ ।
घटना हिजो दिउँसो सवा १ बजेको हो । जब एक लोकल ट्रेन बंदेल स्टेशन पुग्यो त्यतिबेलै लगभग ५० वर्षका ती व्यक्तिले महिलाको अगाडि अश्लील काम गर्न सुरु गरे । महिलाहरुले यसको विरोध गर्न सकेनन् किनकि ट्रेन हिँड्नेवाला थियो । तर ट्रेनमा भएकी एक २० वर्षीया युवतीले यसविरुद्ध आवाज उठाउने फैसला गरिन् उनले मोवाइल निकालिन् र घटनाको लाइभ प्रसारण गरिन् ।
फेसबुक लाइभका क्रममा युवतीले भनेकी छिन् ‘आजकल सबैलाई प्रमाण चाहिन्छ त्यसैले मैले यो घटनाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने फैसला गरें । उ जे चाहन्छ गर्न दिइयोस् ।’ युवतीको यो कदमको ट्रेनमा भएका अन्य महिलाले समर्थन गरे । केही महिलाले यो घटनाबारे रेलवेका कर्मचारीलाई सूचित गरे । यद्यपि ती व्यक्ति भने भागेको बताइएको छ ।
भर्खरै सिंहदरबारकाे मुख्य प्रसासनिक केन्द्रबाटै अायो यस्तो डरलाग्दो खबर
भर्खरै आयो डा. केसीको सबै नेपाली जनतालाई रुवाउने खबर !!
नेताकै शब ल्याउन यस्तो कठिन छ नेपालमा!
रसियामा जारी विश्वकप रंगशालामामा घट्यो यस्तो घट्ना, सुरक्षाकर्मीलार्इ नै यस्तो चुनाैती!
भर्खरै अायो चार्टड विमान दुर्घटनाकाे दुःखद खबर, स्थानियहरूकाे समेत मृत्युको खबर